जाडो मौसममा बच्चालाई राेगहरूबाट बचाउन के के गर्नुपर्दछ ? – Hamrosandesh.com
जाडो मौसममा बच्चालाई राेगहरूबाट बचाउन के के गर्नुपर्दछ ?
जाडोको मौसममा स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्न अत्यन्त गाह्रो मानिन्छ । मौसम परिवर्तनसँगै रोगहरूको पनि आगमन हुन्छ । विशेष गरी बच्चाहरू यसको बढी सिकार हुने गर्छन् । चिसोले घाँटी दुख्ने समस्या यस मौसममा सामान्य समस्या हा । यसबाट बच्ने केही घरेलु उपचारहरू रहेका छन् । जसबाट घाँटीको दुखाइबाट राहात पाउँन सकिन्छ ।
घाँटीको दुखाई कम गर्न र यसबाट राहात पाउनका लागि दुधमा बेसार राखेर खानु पर्छ । यसमा धेरै गुणहरु रहेका हुन्छन् । चिसो, ज्वरो र घाँटी दुखेको बेलामा यसले धेरै फाइदा गर्दछ । यसको एन्टीइन्फ्लेमेटरी गुणहरूले घाँटीमा भएको दुखाइ कम गर्दछ।
घाँटी दुखेको बेलामा सबैभन्दा साधारण उपाय नुन पानीले घाँटी सेक्नु, कुल्ला गर्नु हो। नुनको पानीले गर्जली गर्नाले घाँटी दुखाई र घाँटी दुखाईमा राहत प्रदान गर्दछ ।
नुनको सट्टा पानीमा थोरै सोडा थपेर बच्चालाई पिलाउँदा बच्चालाई लाभ हुन्छ । सोडाले घाँटीको संक्रमण हटाउन मद्दत गर्दछ । महको सेवनले स्वास्थ्यलाई धेरै फाइदा गर्दछ । यसको एन्टीअक्सीडन्ट र एन्टीइन्फ्लेमेटरी गुणहरूले घाँटी दुखाईबाट छुट्कारा प्रदान गर्दछ । तपाईं तातो दुध वा कागतीको साथ मह लिन सक्नुहुन्छ ।
हरीयो तरकारीहरूमा धेरै भिटामिनहरु पाइन्छन् । मेथीको एन्टीमाइक्रोबियल हुन्छ त्यसैले जसले घाँटीलाई आराम प्रदान गर्दछ । यसले घाँटी दुखाइ, सूजन र जलनबाट पनि राहत दिने गर्दछ । लसुनलाई तरकारीका रुपमा मात्र नभएर औषधीको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको सेवन गर्नाले घाँटीको संक्रमण र प्रकारका रोगहरुसंग लड्न सहयोग गर्दछ । यसले प्रदूषण विरुद्ध लड्न पनि मद्दत गर्दछ ।